China Volvo Generator usoro ndị na-emepụta na ndị na-eweta ngwaahịa | Xinneng
Volvo usoro gburugburu ebe obibi nsụhọ Gen Set nke ya iyuzucha emission soro EURO II ma ọ bụ EURO III & EPA ụkpụrụ. Ọ bụ VOLVO PENTA na-eji mmanụ ụgbọala mmanụ mmanụ dizel nke ndị VOLVO PENTA a ma ama na Sweden mere.
E guzobere akara VOLVO na 1927. Ruo ogologo oge, akara ya siri ike jikọtara ya na isi atọ ya: ogo, nchekwa na nlekọta gburugburu. VOLVO ndị na-esote ụlọ ọrụ VOLVO PENTA na-etinye obi ya dum na mmepụta nke injin mmanụ dizel na-arụ ọrụ, ụgbọ ala mmepụta ihe na ngwaahịa mmanụ mmanụ dizel. Ọ na-aga n'ihu n'ọhịa nke injin cylinders isii na usoro ntinye mmanụ ọkụ wdg.
A na-achịkọta ogwe ọkụ nke anyanwụ (nke a na-akpọkwa modulu nke anyanwụ) site na ọtụtụ mkpụrụ ndụ nke anyanwụ, nke bụ akụkụ bụ isi nke usoro ike anyanwụ na akụkụ kachasị mkpa nke sistemụ ike anyanwụ. Anyị nwere polycrystalline na monocrystalline solar panels.
Ihe nlere anya na "E" bu njikere pjiri gensets;
Tụọ aro ịnabata API CF ma ọ bụ karịammanụ, okpomọkụ / viscosity nke 15W-40
Nke gara aga: Trailer Genedị Generator